Ihe Nketa na cohesion, arụmọrụ na ihe ịga nke ọma na-eme n'ọdịnihu
site admin on May-òtù ezinụlọ-2018
On May 12 na 14, dum isi so na anwansi nri ụgbọ ala ọma ẹkenịmde na 2019 kwa afọ atụmatụ na management nzukọ ọmụmụ. The isiokwu nke a nzukọ ọmụmụ bụ "Ihe Nketa na cohesion, arụmọrụ na ihe ịga nke ọma na-eme n'ọdịnihu", ma kpebisie ike na atụmatụ mmepe nke ụlọ ọrụ na 2019 na p ...
Food na-eweta ọnụ mba 11, o nri mkpakọrịta nwekwara otutu ihe olive alaka ụlọ ọrụ, na-eme ihe!
On December 8, na China (Shaxian) Nri Tourism na Culture Festival kpọpụrụ ya 20 ụbọchị ọmụmụ. E nwere ngụkọta nke 11 si mba gafee mba, gụnyere France, Brazil, India, na ndị ọzọ na mba 11, ebe nri na-ada ọnụ na Sha County, na karịrị 100 mba na loca ...
Magic Food ụgbọ ala Foreign Market R & D Department guzosie ike ma guzosie ike.
Na ịrị elu nke mobile ụgbọ ala erimeri ụlọ ọrụ na onye ahụ nke na ngwaahịa, ndị mobile ụgbọ ala erimeri omenala na-esiwanye na-ewu ewu esenidụt. Ọhụrụ ụlọ ọrụ nke mobile ụgbọ ala erimeri, anwansi nri ụgbọ ala dịwo mara na Chinese ndị mmadụ. Ọ bụ ihe mbụ na ụlọ ọrụ na banyere ...
Aga miri n'ime shop ụgbọ ala ubi, ụlọ ọrụ na mmụọ nsọ site Dubai ụgbọ ala erimeri na now ụlọ ọrụ kpọrọ karịrị 100 nde!
Magic nri ụgbọ ala were mgbọrọgwụ ke imewe na imewe nke ụgbọ ala ụgbọ ala erimeri, na-enwetara imewe ọhụrụ n'ike mmụọ nsọ si Dubai, ụwa kasị ama ụgbọ ala erimeri omenala obodo. The ụgbọ ala mere mfe iji na-mara mma. The kpakpando ngwaahịa na ụlọ ọrụ kere e ukwuu otuto custo ...
Dubai Mobile ụlọ nri choputara Guangzhou International Food Festival
One-oge nleta Guangzhou International Food Festival n'ụwa nile Ọ na-akpatre na-abịa! ! ! Dị ka a agadi nri Gịnị mere aza atụ uche nke a Gọọmet nri heaven? More na-atụghị anya ya bụ na ọ bụ kwuru na nri gwongworo na n'okporo ámá nke Dubai (Food Truck) Ọbụna pụtara na Guangzhou Internation ...